फेसबुकबाट भयो मित्रता, त्यसपछि बढ्यो प्रेम, नालीमा भेटियो यी महिला प्रहरी जवानको शव - समृद्ध नेपाल
भनिन्छ प्रम अन्धो हुन्छ, प्रमले मानिसलाई राम्रो बाटो मात्र न भई नराम्रो बाटो तर्फ पनि धेलिरहेको छ । यस्तै एउटा घटना भारतको उत्तर प्रदेशमा घटेको छ । राजधानी लखनउको पीजीआई थाना क्षेत्रमा एक महिलाको शव भेटिएपछि सनसनी फैलिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा शव महिला हवल्दार रुची सिंहको भएको थाहा भयो । त्यसपछि प्रहरी कारबाहीमा परेको थियो ।
यो घटना प्रेम सम्बन्धको रहेको प्रहरीले जनाएको छ । नायब तहसीलदारले ती महिला हवल्दारलाई फेसबुकमार्फत् मित्रता गरेका थिए । प्रहरीले यस प्रकरणमा लिङ्क थपेर रहस्य पत्ता लगाउने काम गरिरहेको छ । जानकारी अनुसार महिला हवल्दार फेब्रअरी १३ गतेदेखि ड्युटीमा पुगेका थिएनन् । यसपछि महिला हवल्दारका साथीहरूले उनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि रुची सिंहको फोन लगातार स्वीच अफ भइरहेको थियो । त्यसपछि सहयोगीहरूले मुद्दा दायर गरे।
कालीमाता क्षेत्रको नालीमा महिला प्रहरी जवानको शव फेला परेको छ । लखनऊको पीजीआई पुलिस स्टेशनका पुलिसले सुशान्त गल्फ पुलिस स्टेशनलाई यस बारे जानकारी दिए। त्यसपछि प्रहरी जवान रुची सिंहसँग काम गर्ने सहयोगी घटनास्थल पुगेर शव पहिचान गरेका थिए । यससँगै प्रहरीले बिजनौरकी महिला हवल्दारका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि जानकारी गरायो।
प्रहरीका अनुसार घटना प्रेम सम्बन्धको हो । लेडी कन्स्टेबल रुचीको विवाह भइसकेको थियो । उनको विवाह हवल्दारसँग भएको थियो । उनी हाल कुशीनगरमा कार्यरत छन् । जानकारीका अनुसार प्रतापगढको रानीगञ्जमा पोस्ट गरेका नायब तहसीलदारले रुचीसँग फेसबुकमार्फत मित्रता गरेका थिए । त्यसपछि वार्ता चर्कियो । दुवै विगत ५ वर्षदेखि रिलेशनशिपमा थिए । नायब तहसीलदारको पनि विवाह भएको बताइन्छ तर महिला हवल्दारले उनलाई विवाहका लागि दबाब दिइरहेका थिए ।
प्रहरीले घटनामा आरोपी नायब तहसीलदारसँग सोधपुछ गरिरहेको छ । जानकारी अनुसार हत्याको सम्भावना रहेको छ । यद्यपी लखनउ प्रहरीले नालीमा महिलाको शव कसरी भेटियो भन्ने रहस्य छिट्टै पत्ता लगाउने बताएको छ ।
भगवान जस्तै श्रीमान बिनोदलाई सबैले अर्की बिहे गर मर्छे भन्थे तर मानेनन् !
उद्योग मन्त्रालय मोतिलाल दुगडले सम्हाले संगै बन्यो ब्यापारीको अखडा !
५ नम्बर प्रदेशमा माघीको भव्य रौनक, २ दिन सार्वजनिक विदा
सहरको भन्दा गाउले केटि किन मनपराउछ ? एक चोटी यो पढ्नुहोस !
गायिका समीक्षाले नारी शक्तिलाई कमजोर नठान्न दिए चेतावनी !
नानीमैयाँ श्रेष्ठ जसले ७० वर्षमा एमए पास गरिन्
महिलाले कमाण्ड सम्हाल्न सक्दैनन् भन्नेलाई सम्हालेर देखाउँछु !
वनपाखामा लुकीछिपी लगाएको पिरती काठमाडौँ आएपछि टुट्यो !
नेपालमा एक जना संक्रमित फेला पार्न लाख भन्दा बढी खर्च हुँदै !
नेपाल आइडलका सन्ध्या र उल्सन बिवाह बन्धनमा बाधिदै, दुई वर्षदेखी थिए प्रेममा
केहिदिन अघि पुनः एक भएका लाहुरे र लाहुरेनीलाइ छुटाउन फेरी यस्तो खेल !